लघु कथा ः मन र मस्तिस्क जूनेली किरण
Post Date 2022-01-07 14:28:27
बालापनदेखि छरिएर रहेका आफ्ना अनगिन्ती सपनाहरु एकैपल्ट बटुलेर राख्न चाहान्थिन् जूनेली। त्यही महत्वकांक्षाले उनले जीवनमा पटक पटक गल्ती गरिन्। पटक पटक पछुताइन्। तर त्यसबाट पाठ भने सिक्न सकिनन्। यस पटक सायद उनलाई आफै प्रति ग्लानीबोध भएको छ । आफै प्रती रिस छ। अनि सायद आफ्नो बिगतको निर्णय प्रति पछुतो पनि! त्यसैले सायद उनले किरणलाई भेट्न बोलाएका थिइन् । सायद आफू सच्चिन चाहेका थिइन् । तर जूनेलीले जे सोचेकी थिइन् परिणाम त्यस्तो भएन ।
हे भगवान! किरणले यति चाँडो किन बिवाह ग¥यो? जूनेली एक्लै बर्बराउन पुग्छिन्। बिवाह मण्डपमा बस्दा के उसलाई एकपटक पनि मेरो खयाल आएन होला? उनले आफैले आफैलाई प्रश्न गर्छिन्। के किरणले मलाई आफ्नो लाइफबाट चटक्कै बिर्सन खोजेकै हो त?
सोच्दा सोच्दै जुनेलीले किरणको मोबाइलमा डाइल गर्छिन्। मोबाइलको पहिलो चार नम्बर डाइल गरेर उनी रोकिन्छिन् ।
होइन, किरण त अब प्राश्नाको भैसक्यो। मैले उसलाई डिस्टर्ब गर्न मिल्दैन । जूनेलीले वास्तविकता रियलाइज गर्छिन्।
उता किरण पनि कोठामा एक्लै सोचमग्न छ। पृष्ठभूमीमा रेडियोबाट कर्णदासको आवाज गुन्जिरहेको छ।
ऐना हेरि आफैसंग प्रश्न सोध्न डर लाग्यो
किरणलाई पनि जूनेलीको चिनो औँठी उसैलाई फिर्ता दिएर आए देखि मनमा शान्ती भएको छैन। आफ्नो मनमा कोरिएका मायाका डोबहरु मेटाउन किरणले सकेको छैन। उसलाई उकुसमुकुस भएको छ। अतितमा जूनेलीसंग बिताएका तिता–मिठा यादहरुले उसलाई पटक पटक झस्काइरहेको छ। मन र मस्तिस्कको लडाईंमा किरण पिल्सिएको छ। उसको मस्तिस्कले उसलाई स्याबासी दिंदै भन्दैछ –
किरण, तिमीले जे ग¥यौ ठिक ग¥यौ। आखिर तिम्रो र जूनेलीको सम्बन्धमा के नै बाँकी थियो र? तिमी अब प्राश्ना को हौ, मात्र प्राश्नाको !
मनको आवाजले भने उसलाई जूनेली तर्फ तानिरहेको छ। औँठी दिएर छुटिने बेला जुनेलीले एक पटक अंकमाल गर्न गरेको त्यो आग्रहपूर्ण आवाज उसको कानमा अझै गुन्जिरहेको छ। अंकमाल गर्दा जूनेलीको स्पर्श अझै उसले अनुभूति गरि नै रहेको छ।
हुन पनि किरणले जूनेलीलाई औधी माया गर्थे। जूनेलीले इच्छा गरेका हरेक कुरा भुईंमा झर्न नपाउँदै किरणले पु¥याइदिन्थे। जूनेलीले पनि किरणलाई माया नगरेको भने पक्कै थिएन । मात्र कहिले काहीँ उनिहरुको माया बिच बाधक बनिदिन्थ्यो त जूनेलीको महत्वकांक्षा! उनको ठूलो ठूलो सपना! कयौं पटक त किरणले जूनेलीलाई भड्किनबाट रोकेका थिए तर जब किरणले परिस्थिति प्रतिकुल देख्यो, उ पुरै टुट्यो र उसले जूनेलीको इच्छालाई आफ्नो भाग्यको लेखा मानेर सदर गरिदिएको थियो। (क्रमश)